अभावैअभावका बीच पनि सागमा स्वर्ण जित्ने कीर्तिमानी खेलाडीको कथा
२० मंसिर २०७६ शुक्रबार
०६२ तिर स्वयम्भूस्थित गीतमाता स्कुलमा ६ कक्षामा पढ्ने बेला सन्तोषी श्रेष्ठ खेलकुदबाहेक अन्य सबै अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन्थिन् । वादविवाद, कथा, कविता र निबन्ध प्रतियोगितामा उनका सहपाठी छेउसम्म पनि आउँदैनथे । तर उनलाई खेलकुदमा भने फिटिक्कै रुचि थिएन ।
साथीहरूले १५ सय मिटर दौडमा भाग लिऔँ भन्दा उनले नाक खुम्चाइन् । तर उनीहरूकै आग्रहलाई नकार्न नसकेर दौडिनेको सूचीमा उनको नाम पनि चढ्यो । पछि धेरैले नाम फिर्ता लिए । छुट्टै जुत्ता लगाएर दौडिनुपर्ने भएकाले नाम काट्ने वा फिर्ता लिनेको लर्को लाग्यो । दौडिने छात्राहरू कम भएपछि स्कुलले नयाँ नियम लगायो । जसले नाम फिर्ता लिन्छ, उसले २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्छ ।
सन्तोषीसँग त्यतिबेला खल्तीमा ५ रुपैयाँ पनि हुन मुस्किल थियो । जेपर्ला पर्ला भनेर दौडिने निर्णयमा पुगिन्, उनी । बुबाले दसैँमा किनिदिएका चप्पल लगाएर उनले विष्णुमती किनारमा डेढ किलोमिटर दूरी पहिलो स्थानमा पूरा गरिन् । पहिलोचोटि दौडमा प्रथम हुँदा पनि उनलाई दौडिने पनि खेल हुन्छ भन्ने थाहा थिएन ।
यिनै सन्तोषीले आफ्नै आँगनमा भएको १३ औँ संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा कीर्तिमानी स्वर्ण जितेकी छन् । एथ्लेटिक्सको १० हजार मिटरमा उनले जितेको स्वर्ण छोटो दूरीमा नेपालले जितेको पहिलो स्वर्ण हो, महिलाको नाममा । यो विधामा कोलम्बो सागमा सन् २००६ मा कान्छीमाया कोजुले रजत पदक जितेकी थिइन् । त्यही बेला कान्छीमायाले निकालेको ३५ मिनेट ०३ दशमलव ४३ सेकेन्डको टाइमिङ अझै पनि राष्ट्रिय कीर्तिमानका रूपमा कायम छ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदकी ५ हजार मिटर दौडकी विजेता सन्तोषीले नेपाली एथ्लेटिक्सको सात दशकको इतिहासमा महिलातर्फ पहिलो स्वर्ण दिलाएर राष्ट्रलाई ठूलै गुन लगाएकी छन् ।
१७ मंसिर बिहान दशरथ रंगशालाको ट्रयाकमा दौडिँदा सन्तोषीले सुरुबाटै अग्रता बनाएकी थिइन् । भारतीय खेलाडी कविता र उनीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । १० हजार मिटर पूरा गर्न रंगशालाको २५ फन्को मार्नुपथ्र्यो । अन्तिम ल्यापको ५० मिटर बाँकी हुँदा लेनको देब्रेपट्टि रहेकी सन्तोषी हठात् स्थान परिवर्तन गर्दै दाहिनेतिर आइन् । र, आफ्नो गतिलाई अघि बढाइन् ।
सन्तोषी परिस्थितिजन्य घटनाक्रमले डोर्‍याएर एथ्लेटिक्समा होमिएकी हुन् । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका सुनखानीमा जन्मिएकी उनी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु नभएको भए सायदै काठमाडौँ आउँथिन् । काठमाडौँ नआएको भए सायदै एथ्लेटिक्समा लाग्थिन् । र, एथ्लेटिक्समा नलागेको भए देशका लागि पदक जित्ने कुरा पनि हुन्थेन ।
ससाना बालबालिकालाई समेत जबर्जस्ती माओवादी सैनिकमा भर्ती गराउन थालेपछि आत्तिएका बुबा विष्णुकुमार श्रेष्ठले जेठा छोरा केदारलाई काठमाडौँमा एक भाइ र बहिनीको जिम्मा लगाए । गाउँमा हुँदा हजुरआमा उनलाई चरी भनेर बोलाउँथिन् । घर मास्तिरको पसलबाट केही सामान किन्न नातिनीलाई पठाउँदा उनी सन्तोषीलाई फुर्क्याउन त्यसो गर्थिन् । सन्तोषीलाई पनि आफू चराजत्तिकै छिटो लाग्थ्यो । दौडिएर गयो, सामान किन्यो अनि दौडिएरै आयो । यस्तो गर्दा सानैमा दौडिने बानी भयो ।
पछि काठमाडौँ आएपछि पनि धारामा पानी लिन र मट्टीतेलको लाइन छल्न उनी दौडिएर जाने गर्थिन् । दाइ केदार श्रेष्ठले पनि सामान किन्न उनलाई नै पठाउँथे । पढाइ र दौड मात्र होइन, जीवन जिउनलाई पनि उनले खुबै मिहिनेत गरिन् । बुबाले बिदामा आउँदा दिएको खर्चवर्चले नधान्दा र बारीमा रोपेको साग बढी हुँदा सडकमा पसल थापेर पनि यिनले खर्चको जोहो गर्थिन् ।
गीतामाता स्कुल खेलकुदका लागि चिनिएको थिएन । तर पनि अन्तिम समय विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिन निम्तो आउँदा पठाउने छात्रा एउटै हुन्थिन्, सन्तोषी । ७ कक्षामा पढ्दा रेडक्रसले आयोजना गरेको दौडका लागि उनी पनि छानिइन् । प्रतियोगितामा भाग लिने अघिल्लो दिन शिक्षकले भनेको उनी झलझली सम्झिन्छिन्, आजै साँझ स्वयम्भूको एक–दुई चक्कर लगाएर बस्नू । भोलि दौडिन सजिलो हुन्छ ।’
कसरी दौडिने ? दौड पनि विज्ञानभित्र पर्छ । यो पनि खेलकुदको विधा हो भन्ने नजानीकनै दौडिन सुरु गरेको पल सम्झिँदा सन्तोषीको खिरिलो ज्यानमा अहिले पनि छुट्टै फूर्ति र अनुहारमा चमक देखिन्छ । विभिन्न प्रतियोगितामा मध्यम दूरीमा स्कूललाई अनेकन पुरस्कार दिलाएपछि उनलाई छनोट खेलिरहने झन्झट भएन । एउटा मात्रै कोटा आए पनि सन्तोषी स्वत: सहभागी हुन्थिन् । धेरै कोटा आए मात्र अरूले मौका पाउँथे । यसै क्रममा उनले पहिलो राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको पनि अनुभव बटुलिन् ।
एसएलसी सकाएर प्लस टु साइन्समा भर्ना हुने बेलासम्म पनि उनी नियमित दौडिरहेकी हुन्थिन् । विभिन्न प्रतियोगितामा फारम भर्ने कामचाहिँ दाजु केदार र उनका साथी लक्ष्मण मल्लले गरिदिन्थे । हुन त प्लस टु पढ्ने बेला यिनले ट्युसन पढाएर अतिरिक्त आम्दानी सुरु गरिसकेकी थिइन् । तर दाजु केदारले यिनको ट्युसन छुटाइदिए । ‘शिक्षक बन्ने भए पो ट्युसनलाई जारी राख्ने । लक्ष्य अर्कै छ भने किन यसमा समय खेर फाल्ने ?’ दाजुको यही कुराले उनको मन छोयो । त्यतिबेलासम्म भविष्यमा के बन्ने भन्ने योजना सन्तोषीको दिमागमा आइसकेको थिएन । दौडिने कामले चाहिँ निरन्तरता पाइरहेकै थियो ।
पब्लिक हेल्थमा स्नातक अध्ययन गर्ने बेला पनि यिनी फुर्सदमा दौडिरहेकै हुन्थिन् । मंगलबार कलेज बिदा हुँदा यिनी दौडिएरै धेरै परपरसम्म पुग्थिन् । अर्को साता सोही स्थानभन्दा पर पुग्नुपर्छ भनेर सन्तोषीले आफू दौडिएको स्थानमा चित्र कोरेर या अन्य चिनो छाड्ने गर्थिन् ।
यिनको भाग्य बदलिएको चाहिँ एडिडास रनपछि हो । कलेजमा प्रि–बोर्डको जाँच र एडिडास रन एकै दिन पर्‍यो । जाँच छाड्ने या दौड, दोधारमा थिइन् सन्तोषी । दुईमध्ये एक रोज्न निकै अप्ठेरो पर्‍यो, यिनलाई । तर पछि कलेजले यिनका लागि जाँच ३ घन्टा पर सार्‍यो । सो प्रतियोगितामा सन्तोषी तेस्रो भइन् । पहिलो स्थान कान्छीमाया कोजु र दोस्रोमा विश्वरूपा बुढा आइन् । अहिलेकी नामी अल्ट्रारनर मीरा राई सन्तोषीभन्दा पछि चौथो भइन् ।
एथ्लेटिक्सका पूर्वराष्ट्रिय प्रशिक्षक रघुराज वन्तको नजर सन्तोषीमा पर्‍यो । मध्यम दूरीको धावकमा हुनुपर्ने शारीरिक बनोट र मिहिनेत गर्ने सन्तोषीको बानीले वन्तलाई तान्यो । धेरै पटक उनले सन्तोषीलाई फोन सम्पर्क गरेर दौडिन प्रेरणा दिइरहे । सन्तोषी पढाइ छाड्ने पक्षमा थिइनन् । पढाइ सकिन दुई सेमेस्टर बाँकी हुँदा सन्तोषी प्रशिक्षण लिन राजी भइन् । तर वन्तले परिवार त्यसमा पनि बाआमाको मन्जुरीबिना उनलाई प्रशिक्षण नगराउने अड्डी लिए । त्यसपछि वन्तप्रति सन्तोषीको श्रद्धा झनै बढेर आयो । पछि तिनै गुरुको प्रशिक्षणमा आफूलाई समर्पित गरिन् । भन्छिन्, “यदि मैले रघु गुरुजस्तो प्रशिक्षक नपाएको भए आज यो अवस्थामा आइपुग्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो होला । पछि थाहा भयो, उहाँ त नातामा मेरो हजुरबुबा पर्नु हुँदो रहेछ ।”
स्वर्ण जित्नेहरू ।
प्रशिक्षक वन्त पनि सन्तोषीमार्फत आफ्नो सपना साकार पार्ने यत्नमा रहेछन् । आफ्नो जमानामा दौडमा भाग लिए पनि उल्लेख्य सफलता नपाएका वन्तले कान्छा छोरालाई छोटो दूरीमा दौडाउने प्रयास गरे । स्प्रिन्टमा राम्रो भए पनि उनका छोराले राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेनन् । सन्तोषीमा लुकेको अद्भुत प्रतिभा देखेपछि उनको सपनाले झन् ठूलो आकार लिएको रहेछ । त्यसैले त उनी आफ्ना चेलाचेलीलाई घरमै खाना पकाएर टिफिन बक्समा हालेर प्रशिक्षण स्थलमा खुवाउने गर्दा रहेछन् । भन्छन्, “आफ्नो पालामा दौडिएर पदक जित्न सकिएन । अब यिनीहरूले जितेको हेरेर खुसी हुन्छु ।”
१० हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जिते पनि २० मंसिरको ५ हजार मिटर स्पर्धामा भने सन्तोषी चौथो भइन् । ५ हजार मिटरमा पनि सुरुबाटै अग्रता बनाएकी सन्तोषी अन्तिम २ ल्यापमा भने निकै पछाडि परिन् । ‘१० हजारमा दौडिने म एक्ली थिएँ । अन्य प्रतिस्पर्धी पावर रिजर्भ गरेर बसेका रहेछन् । मैले ट्याक्टिकल मिस्टेक गरेँ,” उनी भन्छिन्, “सुरुबाटै लिड गर्ने मनसाय नबोकेको भए सायद राष्ट्रलाई दोस्रो स्वर्ण दिलाउँथेँ होला । तर सोचेका र देखेका सबै सपना पूरा नहुने रहेछन् ।”
१३ औँ सागको व्यवस्थापन फितलो र खेलाडीको मनोबल बढाउने काममा खर्च नगरिएको एवं खेल सामग्री समयमै नल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहँदा पनि २६ वर्षीया सन्तोषी गुनासो गर्ने मुडमा छैनन् । “खेलाडीका लागि क्याम्प राखिएको छ, प्रशिक्षण गराइएको छ । १३ औँ साग घरमै आयोजना भएको छ । राज्यले केही दिएन भन्न मिल्दैन,” उनी थप्छिन्, “खेलकुदले केही पाएन भन्नुभन्दा अन्य क्षेत्रले के–कति पाएको छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । अर्को देशसँग होइन, आफ्नै देशको अन्य क्षेत्रसित खेलकुदको तुलना गर्नुपर्छ ।”
आफूमा विश्वास गर्ने र अरूलाई पराजित गर्ने नभई आफैँलाई उछिन्ने प्रयास गरिए सफलता मिल्ने उनको तर्क छ । “अरूलाई हराउँछु भन्न थालियो भने त नकारात्मक भइन्छ । आफूले सकेको गर्ने हो । जित्नका लागि त ‘स्काई इज द लिमिट’ सोच राख्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “मनमा सकारात्मक भावना आएन भने अन्तिम समय सही निर्णय लिन सकिन्न ।”
हुन पनि १० हजार मिटरको अन्तिम ५० मिटरमा लेन परिवर्तन गर्ने र आफ्नो किक पावरमा विश्वास नगरेको भए उनले कीर्तिमानी स्वर्ण जित्ने थिइनन् । राष्ट्रले आफ्ना लागि १३ औँ साग आयोजना गरिदिएको ठान्ने सन्तोषी साँच्चै नामजस्तै सन्तोषी छन् ।